Clicktivism - fiaraha-miasa amin'ny fipihana bokotra VAOVAO FOTOTRA
Mahagaga ny Paska manaitra
Mandresy fonosana mpankafy an'i Ben & Jerry!
Hafatra avy any Jane Fonda ho an'ny Kalifornia: Support AB 345 | Greenpeace Etazonia
Rehefa mihomehy ianao dia hozatra mihoatra ny 100 izay mihetsika ao amin'ny vatanao, dia misento ianao ...
ny Veronika Janyrova 29. Septambra 2017, 11: 54 7.7k Views 1 fanehoan-kevitra
Ny endrika somary vaovao ataon'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena dia mahatonga ny boribory eo ambanin'ny anarana hoe "Clicktivism". Midika izany fa ny fandaminana ny fihetsiketsehana ara-tsosialy amin'ny fampiasana media sosialy. Mifamatotra amin'izany dia ny fisian'ilay antsoina hoe "slacktivism", teny marolafy izay nahatonga azy ho amin'ny lisitr'ireo andiany tamin'ny taona tao amin'ny Rakibolana Oxford. Sokajy avy amin'ny teny anglisy slacker (faullenzer) sy mpikatroka (mpikatroka) ary manondro ny ambany ambany ny fanoloran-tena manokana izay ilana an'io fandraisana anjara ofisialy io. Noho izany, ny fampifangaroan-kevitra ratsy dia tsy mahagaga, satria mieritreritra ny "mpikatroka dizitaly", miaraka amin'ny ezaka kely ary tsy misy fanoloran-tena manokana hahazoana fieritreretana madio sy ego mahafa-po.
zava-bita: Ny fahombiazana lehibe indrindra amin'ny fiarahamonim-pirenena tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny vokatry ny clicktivism: Ny Vondron'olona Eropeana Voalohany (EBI) "Right2Water" dia mila nahita mpanohana iray tapitrisa isaky ny ampahefatry ny firenena mpikambana ao amin'ny Vondron'olona Eropeana, ka ny Vaomiera eropeana no miatrika io olana io. Ny ankamaroan'ny alàlan'ny fangatahana an-tserasera, ny sonia 1.884.790 mirehareha dia nangonina farany. Tahaka izany, ny fanoherana lehibe amin'ny fifanarahana ara-barotra malalaka be dia be CETA sy ny TTIP dia tokony hoheverina ho famporisihana nomerika ny ONG eoropeana: lehibe tokoa ny 3.284.289 eropeanina nanohitra azy io.
Tsy mitsahatra eo ny fanakianana endrika endrika dizitaly. Noho izany, ny Slacktivism dia tsy hisy fiantraikany amin'ny "tena fiainana" ary manala ny "politika" tena fanaovana ankolafy amin'ny fety, fikambanana na firaharahan'ny olom-pirenena eo an-toerana aza, hoy ny mpitsikera. Koa satria ny hetsi-panoherana virtoaly matetika dia manana mari-pahaizana avo lenta amin'ny marketing, dia azo inoana ihany koa ny hahatakatra ny hetsika sosialy ho toy ny fampielezana dokam-barotra fotsiny. Sakafo fifadian-kanina demaokratika. Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, hanamafy ny fizarazarana nomerika eo amin'ny fiaraha-monina izy ireo ary noho izany dia hanimba ny vondrona tsy manan-tsaina ara-politika.
Clicktivism - zava-bitan'ny fiarahamonim-pirenena
Amin'ny lafiny iray, misy ny fahombiazana mahavariana izay nasehon'ity endrika fiaraha-mihetsika civic ity. Ohatra, ny famotsorana ilay mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Ai Weiwei nataon'ny manampahefana shinoa tamin'ny taona 2011, ny fikambanan'ny ankivy manohitra ny tranombarotra amerikana amerikana Whole Foods na amin'ny lafiny iray, nahomby ny fanentanana olona nahomby toy ny kiva.org na kickstarter. Ity farany dia nahavita nanhetsika an'arivony miliara dolara ho an'ny tetikasa film, mozika ary zava-kanto tamin'ny taona 2015.
Tahaka izany ihany koa, ny tambajotra tsy mihetsika eran-tany TTIP dia niompana tamin'ny alàlan'ny media sosialy, izay nahafahan'ny alàlan'ny firaisankina hamorona mihoatra ny fikambanana 500 manerana an'i Eropa. Ary farany nefa tsy ny kely indrindra, ny fanampiana manokana momba ny mpitsoa-ponenana voalamina manokana any Eropa dia mikarakara amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy ary afaka nanentana ireo mpiasa mpialokaloka an'arivony maro ary nandamina ny fanampiana vonjy taitra tsirairay.
Nandritra ny fitondrana tsy refesina, ny fikatrohana nomerika dia mitondra hery mahery vaika kokoa. Araka izany, ny andraikiny amin'ny fivoahan'ny Arab Spring, ny hetsika Maidan na ny fibodoana ny zaridainan'i Gezi any Istanbul dia zara raha misy hanambany. Raha ny marina, ny fikambanan'ireo fihetsiketsehana ara-tsosialy tsy misy ny media sosialy dia toa tsy takatry ny saina na tsy mampanantena loatra.
Efa hatry ny ela no lasa hetsika iraisam-pirenena ny fikatrohana nomerika. Ny sehatra roa lehibe indrindra ho an'ny fangatahana an-tserasera (change.org sy avaaz.org) dia miara-manakaiky ny mpampiasa 130 an-tapitrisany izay afaka manao sonia fanangonan-tsonia iray miaraka amin'ny bokotra totozy iray ary mamorona iray hafa. Ohatra, Change.org dia nitarika ny anglisy enina tapitrisa mba hanao sonia fanangonan-tsonia iray an-tserasera. Raha ny filazan'ny mpandraharaha amin'ity sehatra ity, dia ny antsasaky ny fangatahana 1.500 napetraka isam-bolana any Angletera dia mahomby.
Clicktivism - eo anelanelan'ny Marketing sy activism
Na eo aza ny dinamika erak'izao tontolo izao sy ny fahombiazan'ny fihetsiketsehana, dia maro ireo mpahay siansa sy siansa sôsialy iray dia mbola manontany tena ny hoe ny fikatrohana an-tserasera dia raha ny marina dia ny fandraisana anjara politika amin'ny heviny demokratika.
Anisan'ireo fisalasalana miavaka amin'ity hetsika ity i Mika White, mpanorina ny hetsika Occupy Wall Street ary mpanoratra ny bestseller "Faran'ny fihetsiketsehana". Ny tsikera nataony dia mifototra indrindra amin'ny fetra mikapoka eo anelanelan'ny varotra sy ny fikatrohana: "Manaiky izy ireo fa ny paikadin'ny fikarohana sy ny tsena ampiasaina amin'ny fizarana taratasy fidiovana dia ampiharina amin'ny hetsiky ny fiaraha-monina." Izy aza mahita ny loza ateraky ny fanaovana politika ara-drazana bebe kokoa. Nopotehina mihitsy aza ny hetsika sy ny olompirenena any an-toerana. "Namidin-tsofina izy ireo fa afaka manova an'izao tontolo izao ny fisintonana ny harato", hoy i White.
Ireo mpiaro ny fikatrohana nomerika kosa etsy andaniny, dia manondro ireo tombony maro azo avy amin'ny endrika ambany amin'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena. Araka ny voalazan'izy ireo, ny fangatahana an-tserasera sy ny forum dia manamora ny olona amin'ny fahitana ampahibemaso ny tsy fahafaliany na ny famporisihana ary ny handamina na hanohitra ny zavatra sasany. Ka lafo fotsiny, mahomby ary mahomby.
Raha ny marina, maro ny fanadihadiana no nanaporofo fa ny fikatrohana nomerika dia tsy fifaninanana amin'ny hetsi-panoherana demokratika kilasy amin'ny alàlan'ny fangatahana, fanangonana sonia, fitokonana ary fihetsiketsehana. Fa kosa, ny teknolojia media sosialy dia fanampiana amin'ny fisian'ny hetsika ara-tsosialy sy politika.
Zatovo fahatanorana Clicktivism
Farany nefa tsy latsa-danja amin'izany, ny fikatrohana an-tserasera dia afaka mampiditra antokon'olona tsy miraharaha ara-politika sy tsy zara raha hita am-pahombiazana amin'ny lahateny politika: ny tanora. Vondron'olona tsy mahatsiaro ho voakasiky ny olana politika tahaka ny ataon'ireo mpanao politika. Araka ny voalazan'i Mag. Martina Zandonella, psikolojika ara-tsosialy ao amin'ny ivon-toeram-pikarohana SORA, ny tsy fahaizan'ny politikam-pandrosoana be dia be ny fanavakavahana mazava: "Ny tena tanora dia tena mankatò, fa tsy amin'ny heviny ara-politika. Ny fikarohana nataontsika dia naneho fa ny politika ho an'ny tanora dia zavatra hafa fotsiny. Tsy hitan'izy ireo, ohatra, ny fihetsiky ny sekoly ho fandraisana anjara amin'ny politika, izay tena ataontsika. "
Izay tanora adiresy dia politika ara-politika, mampiseho ihany koa ny anjarany. Hatramin'ny 2013, ireo tanora any Aotrisy dia nanaiky ny fandatsaham-bato hatramin'ny taona 16 ary nahatratra ny laham-pifidianana mitovy tao anatin'ny telo taona raha ny salan'isan'ny mponina. "Ho an'ny tanora dia tena zava-dehibe ny lohahevitra momba ny tsy an'asa, ny fanabeazana ary ny fahamarinana ara-tsosialy. Somary diso fanantenana fotsiny izy ireo amin'ny resaka politika isan'andro ary tsy mahatsapa ny an'ny mpanao politika mavitrika ", hoy i Zandonella. Ho azy ireo, ny Clicktivism dia tena endrika iray amin'ny fandraisana anjara demokratika ary izy ireo dia mankasitraka ny fomba fivoahana ambany izay atolotry ny fifaneraserana nomerika. "Raha ny fomba fijery demokratika, tsy hanahirana fotsiny raha tsy nomena ny fidirana, ohatra ny amin'ny zokiolona."
Ny mpikaroka tanora tanora sady mpanoratra ny fandinihana "Tanora Alemana" Simon Schnetzer dia tsy mino fa afaka ampidirina amin'ny resaka politika nentim-paharazana ny tanora miaraka amin'ny fanampian'ny media sosialy. Raha ny filazany, hoy izy, "sehatra politika vaovao mipoitra dia mitovy amin'ny fisainana fotsiny, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny sehatry ny mahazatra mahazatra ho sehatra politika. Mbola vitsy ny tetezana anelanelan'ireto efitra roa ireto. "
Noho ny fahatsapan'ny tanora any Alemanina dia tsy mahatsapa tsara ny fisian'ireo mpanao politika tena izy, fa mbola te-handray anjara amin'ny fananganana hevitra, Simon Schnetzer dia namolavola ny foto-kevitry ny mpikambana Digital: "Izy ireo dia solontenan'ireo solontena ao amin'ny trano solontenany, ny fitondran-tenany amin'ny fifidianana mivantana mivantana amin'ny Internet olom-pirenena liana no voafehy. Ohatra, ny solombavambahoaka nomerika dia azo omena zato isan-jaton'ny vatolampy ary ho toy ny mariky ny mponina. Ny solombavambahoaka nomerika dia mety ho fomba iray handraisana fanapahan-kevitra ara-politika miaraka amin'ny vahoaka ".
18. Aprily 2018 ao amin'ny 9: 49
Ny resaka farany momba ny fifohana sigara eny amin'ny trano fisakafoanana dia mampiseho fa ny mpanao politika no manapa-kevitra raha ny fangatahana amin'ny Internet no heno na tsia.
Previous article Phenomena: Inona marina no ao amin'izy ireo?
Lahatsoratra manaraka Therapy biby: Izao no fomba ampio ny alpacas amin'ny ankizy
in Global, fanavaozana, Henoy, fiarovana ny tontolo iainana
Mijanona ao Lalibela izahay izao amin'ny fitsangatsanganana virtoaly androany.
Torohevitra momba ny matihanina - faritra matevina! Fantatsika rehetra fa natao ho an'ny hoditra io ...
in Germany, Initiatives sy fangatahana, Vaovao momba ny ONG, Videos
Hanafoana ny fitaovam-piadiana niokleary | Greenpeace Germany
in Initiatives sy fangatahana, Vaovao momba ny ONG, Soisa, Videos
Ny valanaretina ho tetezana | Greenpeace Soisa
Phenomena: Inona marina no ao amin'izy ireo?